Waqtiga firaaqada / dhiirigelinta - Geofumadas
Fikradaha iyo fikradaha qoraaga geofumadas
Venezuela ka tag waqtiga waqtigooda
Waxaan u maleynayaa in qaar ay ogyihiin xaalada ka jirta Venezuela, waxaan dhihi karaa qaar sababtoo ah waxaan ogahay in Venezuela aysan aheyn udub-dhexaadka caalamka, sidaas darteedna waxaa jira dad aan xitaa ogeyn meesha ay ku yaalliin. Qaar badan oo ka mid ah kuwa i akhriya, dareemaya oo la silcaya xaaladda dibadda, in yar ayaa rumaysan inay yaqaanaan waxa dhacaya, waxay sameeyaan xukunno ...
Leisure / waxyi, Politics iyo Dimuqraadiyadda
Ka tagista Venezuela ilaa Kolombiya - My Odyssey
Weligaa miyaad dareentay jidhka naf la'aan? Waxaan dareemay dhawaanahan. Noolaha wuxuu noqonayaa wax aan firfircooneyn oo aad kaliya dareento inuu nool yahay maxaa yeelay wuu neefsadaa. Waan ogahay inay qasab tahay in la fahmo, iyo in ka sii badanba markii kahor intaanan ujeesan inaan ku faano naftayda qof wanaagsan, oo ay ka buuxdo nabad ruuxi ah iyo ...
13 Sawirro taariikhi ah oo ku saabsan Ganacsi Insaan
Sannadkii 2015 wuu dhammaaday.Haddii loo dabaaldego, waxaan kuu soo qaadaneynaa dhowr sawir oo taariikhi ah oo ina xusuusinaya in waqtigu uusan dhaafin raaxo. Diyaaradda LZ 129 Hindenburg, oo ah nooca loo yaqaan Zeppelin, ayaa lagu burburiyay dab markii ay ka degaysay New Jersey bishii May 6, 1937. Shilkaasi wuxuu sababay dhimashada 36 ...
Engineering, tabo cusub, Leisure / waxyi
6 dhinac oo laga tixgelinayo Diiwaanka Isdhexgalka - Cadastre
Sameynta Cadastre iyo Diiwaangelinta Hanti Ma-guurtada oo wada shaqeynaya hadda waa mid ka mid ah caqabadaha ugu xiisaha badan geeddi-socodka casriyeynta ee nidaamka xuquuqda lahaanshaha. Dhibaatadu badanaa waa isku mid, xitaa waxay ka sii gudubtaa macnaha guud ee Hispanic. Dhinac, himilooyinka ...
cadastre, egeomates My, Leisure / waxyi
Waxyi - Isbeddellada teknoolojiyada GIS - ESRI UC maalinta ugu horreysa
2005 waxay ahayd marki iigu horaysay ee aan kaqeyb galo Shirka Users Users, marwalba isla goobta: San Diego Convention Center, oo ay ku xardhan yihiin boorar waaweyn oo ka laalaada meerimaha marinka dhalada dheer. Ku garaacaya carabta gadhka dhegaha leh iyo jaakadaha cad, brunettes ka socda Afrika oo dhoola cadeynaya ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Leisure / waxyi
Way adkeyd in la qanciyo madaxdii waqtigaas; in qalabka la soo iibsanayaa ay ahayd in laga caymiyo xatooyada, waxyeelada iyo shilalka. Waa wax la fahmi karo marka ugu horeysa, oo leh su'aalo ay ka mid yihiin: Haddii qalabka mar dambe loogu deeqo degmada, maxaa diidaya inay ka bixiyaan caymiska? Ka dhanka ah xatooyada? Tani miyaanay ku siinaynin fursado ...
Ku dhowaad warqaddii ugu dambaysay ee la-hawlgalayaasheyda ... kama tegin
Kaliya maanta toban maalmood ka hor, sidaad ogtahay, waxaan joojiyay inaan saxeexo waraaqaha la xidhiidha mashruuc mashquul igu ahaa oo igu dhiirrigeliyay toddobo sano. Xaqiiqdii waxay sugayeen sharaxaad, sababtoo ah dhowr qof oo aad isugu dhow ayaa ogaa iyaga maalmo yar ka hor, in kasta oo la qorsheeyey laga soo bilaabo maalintii aan go'aansaday ...
Xilliga ay u hilowday in wax laga beddelo xaaladdu ay bilaabato xoqid ... Waxaan la wadaagayaa mid ka mid ah macsalaameyntii ugu wanaagsanayd ee aan ka arkay mid ka mid ah lataliyayaashaydii. Maaddaama aanan rabin inaan kugu daro emaylka guud iyo macasalaameynta macmiilka (waxaad tahay wax kale) waxaan kuu sheegayaa: Inaad tahay 09:30 Juun 28, ...
Miyaan u isticmaali karaa sawirrada Google Earth for cadastare?
Waqti fiican la qaadashada saaxiib Dutch maanta, waxaan muujinayaa xoogaa isku mid ah oo u dhexeeya geeddi-socodka kansarku u horseedo cilmu-nafsiga iyo jacaylka Google Earth ee leh dhammaadka qaldan: Marxaladda 1: Cabsi. Farsamo yaqaan ayaa tagaya goobta isagoo ka jawaabaya cabir uu ka codsaday milkiilaha ...
cadastre, Google Earth / Maps, Leisure / waxyi
4 daqiiqado muhiim ah taariikhda Geofumadas
- Waa inaan yeelanno baloog ... Ayuu yiri sayidkaygu (HM), iyadoo indhihiisu ka go'an yihiin adduunkan. Waxaan ka xumahay inaan garan waayo eraygii uu sheegay nin 73 jir ah ka hor cabashadaydii adkayd ee ku saabsanayd sababta internetka looga jaray degmooyinkii dayactirka ka waday. In ka badan ayaa lagu sheegay iyadoo ...
Dib-u-warshadeyn laga sameeyay habeennadaydii cidlada ahayd ee Guatemala, hadda oo aan ku sii jeedo halkaas waxaan u daayay wax adiga kugu maaweelinaya. Waan ogahay, kama buuxineyso jahwareerka tikniyoolajiyadda ... laakiin way jirtaa. Waxay ahayd gabar macaan oo indho madow lehna timo toosan oo garbaha dhererkeedu yahay, mid kamid ah qaraabada mudnaanta leh ee shaqaalaha dugsiga hoyga ah ...
Ka mid noqoshada dhinaca bulshada hababka tababarka farsamada
Toddobaadkan waxaan la hadlayey mid ka mid ah shaqaalahayga, waxaanan wax ka qabanaynay taariikh ku saabsan cirro cirro ah oo sannado ay nagu qaadanayeen geeddi-socodkan horumarineed - ka badanna waa kan iga taageera midka bidaarta leh. Waxaan sharraxay sida isbeddelka ku-mashquulintaydu iiga dhigtay inaan ka beddelo qaybta farshaxanka oo aan u beddelo injineernimada ka dibna aan u aado ...
Baridda CAD / GIS, Leisure / waxyi
Sida loo xariiro internetka meelo fog
Waxaan had iyo jeer isweydiinayay waxa aan sameyn doono haddii aan u guuro magaalo yar, halkaas oo marin u helka isku xirnaanta aan ku raaxeysano magaalada ay ku yar tahay. Inbadan hadda in maniaskeena isdhexgalka ee la yimid internetka uu naga dhigayo inaan aad uga warqabno emayllada cusub, wararka ku saabsan shabakadaha bulshada ...
32 sano kadib, ku xir fiilooyinka, wareegyada xir
Safarkan fasaxa xagaaga wuxuu ahaa mid ka badan uun buufiska walaaca. Aniga kaliya maahan, waxay aheed inta kale ee qoyskeyga ah oo ila socotay. Mararka qaar isbarbardhiga ay dunta isku xirmaan ayaa umuuqda mid dhab ah oo waqti ku qaadanaya milicsiga. Kuleylka xagaaga ...